रुसबाट आयो खुशीको खबर, नेपालसँग गरेको बा'चा पुरा गर्दै पुटिन, नेपाललाई पठाउँदै यतिधेरै को*रोना खो*प ! (जानकारीका लागि सेयर गराै) -
Home News रुसबाट आयो खुशीको खबर, नेपालसँग गरेको बा’चा पुरा गर्दै पुटिन, नेपाललाई पठाउँदै...
रुसबाट आयो खुशीको खबर, नेपालसँग गरेको बा’चा पुरा गर्दै पुटिन, नेपाललाई पठाउँदै यतिधेरै को*रोना खो*प ! (जानकारीका लागि सेयर गराै)
रुसबाट आयो खुशीको खबर, नेपालसँग गरेको बा’चा पुरा गर्दै पुटिन, नेपाललाई पठाउँदै यतिधेरै को*रोना खो*प !
कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओली पनि ‘मै सर्वेसर्वा नेता’ र ‘मेरो निर्णय बदलिन नसक्ने’ भन्दै अदालतमा विचाराधीन संसद् विघटनको मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै कुनै पनि हालतमा संसद् बिउँतिन नसक्ने जिकिर गर्छन् । तर उनको असंवैधानिक कदमका पक्षमा वकालत गर्ने, समर्थन जनाउने उनका अघिपछिका व्यक्ति र कार्यकर्ताबाहेक अरू देखिँदैनन् ।
उनको बोलीमा अब धेरै अहंकार र अतिशयोक्ति देखिन थालेको छ, तथ्यमा आधारितभन्दा बढी आफैं मपाईं भएको पाइन्छ । तर खुसीको कुरा के छ भने, अब चेतनशील जनता के ठीक र के बेठीक छुट्याउन सक्षम भएका छन् । अब कामका आधारमा राजनीतिकर्मीको मूल्यांकन हुन थालेको छ । उनीहरू संविधानसम्मत व्यवस्था र सक्षम सरकार खोज्छन् तर सरकार भ्रष्ट र कमजोर बन्दा यसको विकल्प खोज्छन्, जुन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सकारात्मक पक्ष हो ।
Previous articleबिक डाइभरले बाहुनको छो’रि पाउदा घरको श्री’मतीलाई यस्तो गरे। भा’ग्दा भा’ग्दै समातिए पछि यस्तो भन्छन
Next articleअन्नतः अघोरी बाबाको डि’भोर्स भयो ? बाबालाई छा’डेर एक्लै अमेरिका उडिन श्री’मति Aghori Baba